Ciyaaraha toogashada ee ugufiican PC | War gadget
Ciyaaraha toogashada ee ugufiican PC
Haddii nooc kasta uu ka muuqdo mid kale oo ka mid ah kumbuyuutarka kumbuyuutarka, taasi waa Shotters (ciyaaraha toogashada). Waxay ku taal barxaddan halkaasoo cayaarahan inta badan looga faa'iideysto, oo leh buug-yare ballaaran oo dhammaantood ah, labadaba qofka koowaad iyo qofka saddexaad. Waxaan sidoo kale heli karnaa ciyaaro tartan ah, halkaas oo dhinaca internetka miisaanka lagu kordhiyoQaar badan oo ka mid ah ciyaaraha internetka waa waxa aan ku arki karno Esports. Ku ciyaarista kumbuyuutarka iyo jiirka waxay siinayaan qollo badan oo lagu hagaajiyo, maaddaama ujeeddada inta la guurayo ay fududaanayso.
Noocyada toogashada cayaaraha, waxaan kaheleynaa kuwa caadiga ah oo leh qaab olole, halkaas oo sheeko sifiican looga sheekeeyo ay nala socoto, kuwa tartamada ciyaaraha kooxaha, halkaasoo wadashaqeynta saaxiibadeena ay muhiim u tahay guusha, ama dagaalka royale, Halka helitaanka kooxda ugu fiican khariidada ayaa naga caawinaysa inaan ku guuleysano ciyaarta, kaligeen iyo kuwa kaleba. Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa kulamada toogashada ee ugu fiican PC.
1 Wicitaanka Waajibaadka: WarZone
4 HALO: Master Chief Collection The
5 Rainbow Lix: Go'doonsan
7 Metro Baxniintii
8 Nolosha badh: Alyx
Wicitaanka Waajibaadka: WarZone
Looma waayi karo meel sare, Wicitaanka Waajibaadka ayaa ku guuleystey inuu abuuro ciyaar aan horay loo arag oo hagaajinaya wixii lagu arkay Blackout ee Call of Duty Black Ops 4. Khariidad weyn oo ku saleysan Khariidadaha Dagaalkii Casriga ee 2 oo leh aag aad u weyn oo ay 150 ciyaartoy is ugaarsadaan midba midka kale ilaa kan ugu dambeeya taagan. Ciyaartu waxay leedahay habab dhowr ah, oo aan ka mid ahaan karno inaan si gooni ah u ciyaarno, duos, trios ama quartets, oo aan la sameysano koox saaxiibadeena internetka. Ciyaartu waxay sidoo kale na siisaa qaar ka mid ah hababka ciyaarta ugu dambeyn qaab dhacdooyinka, sida Halloween ama Christmas.
Ciyaartani waxay leedahay ciyaar iskutallaab ah, sidaa darteed haddii aan firfircoonaanno waxaan dagaal la geli doonnaa dhammaan aagagga cinwaanka loo heli karo, kuwaas oo ah PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S. Haddii aynaan rabin inaynu u gudubno ciyaarta si aan u dheelitirno miisaanka waan joojin karnaa wakhti kasta. Waxa ugu fiican ee cinwaankan ayaa ah inay gebi ahaanba bilaash tahay, oo lagu bixiyo lacag bixin gudaha dalabka iibsiga hubka ama maqaarka maqaarka. Waxa muhiimka ah ayaa ah in lacagahaasi aysan wax faa iido ah keenin, waxaan sidoo kale ku iibsan karnaa kaarka dagaalka for 10.
Jadwalka tooska ah ee dib-u-soo-celinta abaalmarinta abaalmarinta ee la sii daayay 2016 oo ay soo saartay ID Software, halkaas oo ay dooneyso inay bixiso isku-darka ugu fiican ee xawaaraha, jahwareerka iyo dabka suurtogalka ah. Cayaartu waxay u taagan tahay dhinaca shaqsiyadeed ee na siineysa dagaallo cajiib ah oo ka dhan ah xayawaanka ka soo jeeda dhulka hoostiisa halkaasoo waxa ugu fiican ay yihiin sida naxariis darrada ah ee ay u noqon karaan, sababtoo ah Gore ay bixiyaan. Gudaha DOOM daa'in, ciyaartoygu wuxuu qaataa doorka gacan ku dhiiglaha (DOOM Slayer) waxaanan u laabanay inaan ka aargoosanno xoogaga cadaabta.
Cayaartu sidoo kale waxay u taagan tahay heeso heer sare ah iyo qeyb muuqaal ah oo meesha ka saareysa xujooyinka iyadoo aan loo eegin barxadda aan ku ciyaareyno, laakiin PC-ga waa meesha aan kaga raaxeysan karno dhammaan haybaddeeda, iyadoo la adeegsanayo qaab aad u sarreeya oo ku saabsan 144Hz kormeerayaasha.
Ku hel DOOM daa'in ah Amazon dalab xiriirkan.
Shaki la’aan waa mid ka mid ah kulamada ugu caansan sanadihii la soo dhaafay, waxay noqotay ifafaale run ah, ciyaar ay wada ciyaaraan da ’weyn iyo dhalinyaro. Waa Dagaal Royale halkaas oo kooxda ama ciyaartoyga ugu dambeeya ee guuleysta uu guuleysto. Waa inaan baarnaa khariidadiisa weyn ee raadinta qalabka si aan ula dagaallano kuwa naga soo horjeeda. Sida WarZone oo kale, waxay leedahay ciyaar iskudhaf ah sidaa darteed labada PC iyo kuwa ciyaarta ku shaqeeya ayaa wada ciyaari doona haddii ay doortaan.
Fortnite wuxuu u taagan yahay inta ka hartay Battle Royale muuqaalkiisa firfircoon iyo aragtidiisa qof-saddexaad, waxay kaloo leedahay nidaam dhisme oo siiya noocyo badan gameplay. Haddii aad raadineyso ciyaar xiiso leh oo aad ku dhex ciyaarto shirkadda, oo leh bilicsanaan aad u daran, shaki la'aan waa ikhtiyaar weyn. Ciyaartu waa bilaash, waxay ku iibsaneysaa arjiga iyadoo loo marayo lacag dalwaddii ay tahay inaan horay u soo iibsanno. Waxaan sidoo kale heli karnaa baaska dagaalka si aan uga helno waxyaabo dheeri ah oo ku saleysan ciyaartiisa.
HALO: Master Chief Collection The
Chief Master-ku waa astaan ​​Xbox ah oo hadda waxaa heli kara dhammaan ciyaartoyda PC-ga, waa fursad uu ku ciyaaro dhammaan sheekooyinka Halo. Xirmo ay ku jiraan Halo: Dagaaladii Dhacay, Halo 2, Halo 3 iyo Halo 4. Dhammaantood waxay ku jiraan xallin fiican iyo waxqabad wanaagsan, ciyaaro leh qaabab qotodheer oo hal ciyaartoy ah, si aad ugu raaxaysato mid ka mid ah sagasyada ugu wanaagsan ee ay soo saarto Microsoft kaligeed.
Intaa waxaa dheer, Microsoft waxay ku dartay tiro aad u tiro badan oo server ah oo loogu talagalay ciyaartoy badan, ciyaarta waxay ku raaxeysataa iskutallaabta u dhexeysa Xbox iyo PC, sidaa darteed ma jiri doonaan ciyaartoy la'aan kulamadaada. Iyada oo leh aragtida qofka koowaad iyo qaar cadawga shisheeyaha ah oo xadhkaha inaga saari doona iyo ciyaar aad u xiiso badan.
Hel Halo: Master Master ururinta qiimaha ugu fiican ee Steam iyada oo tan loo marayo isku xirka
Rainbow Lix: Go'doonsan
Ciyaar kale oo u taagan dhanka tartankeeda, tani waa qeybtii ugu dambeysay ee caanka ah ee Tom Clancy's Rainbow Six saga, oo ay ku jiraan hal ciyaaryahan, iskaashi iyo 5 v 5 qaabab badan oo ciyaartoy ah. Argagixisadu waxay ku deggaan qaab dhismeed, kooxda booliska waa inay ku dilaan qaabab kala duwan oo ay ku weeraraan. Cayaartu waxay leedahay soddon fasal oo loo qaybiyay jinsiyado, mid kasta oo ka mid ah oo ku takhasusay nooc hub ama xirfad ah.
R6 wuxuu ku raaxeeyaa mid ka mid ah jaaliyadaha PC-ga ee ugu awooda badan, isagoo diirada saaraya culeyskiisa ugu weyn dhinaca internetka iyo Esports. Tan iyo markii la bilaabay 2015, ciyaartu ma joojin inay hesho casriyeyn bilaash ah iyo xilliyo siiya nolol aan xad lahayn, marka lagu daro yareynta cayayaanka qaar ee soo ifbaxa ama soo dhexgalka khiyaamada. Ciyaarta hada waxay leedahay qiimo aad u soo jiidasho badan, kaligaa waa la ciyaari karaa laakiin waxaa lagu talinayaa in lala ciyaaro asxaabta si ay ugu raaxaystaan.
Ka hel qaanso roobaad lixaad: hareeree qiimaha ugu fiican ee Steam tan tan isku xirka
Looma waayi karin liiskan, abuurayaasha Titanfall, Respawn Entertainment waxay soo saartay tan ugu wanaagsan ee Titanfall, inkasta oo ay ka tanaasusho magaceeda, haddana sidaas kuma samayn ruuxa ruqsadda iyadoo leh kacsan oo waalan ciyaar. Ciyaartu waxay leedahay khariidad weyn oo aan ku wajahno ciyaartoy badan ama kooxo dagaal halkaas oo qofkii ugu dambeeya uu guuleysan doono, sida dagaal kasta oo royale ah.
Waxaan muujineynaa noocyada kala duwan ee jilayaasha, taas oo aan ka helno kartiyo gaar ah, sida robot leh jillaab kaas oo ka caawin doona inuu gaaro heer sare. ama dabeecad awood u leh adeegsiga xawaare aad u sarreeya ama abuurista barxad lagu boodo oo noo geyn doonta dhinaca kale ee khariiddada. Dhammaantood waxaa weheliya noocyo kala duwan oo hub ah oo aan ku dari karno qalabka ingame, markaa haddii aan helno qori aan qalab lahayn, waxaan ku dari karnaa sida aan u helno ama uga qaadan karno cadawga hoos u dhacaya. Cayaartu waa bilaash oo lacag-ku-bixinta app-ka ah.
Ku hel halyeeyada 'Apex Legends on Steam' tan isku xirka
Midkii ugu dambeeyay ee taxanaha Metro, oo ku saleysan adduunyo-apocalyptic adduunka halkaasoo wuxuushku xukumo waddooyinka, ciyaarta ayaa sheegeysa sheekada Artyom, halyeeyga ciyaarihii hore, himiladiisa adag ee ah inuu nolol cusub ka bilaabo bariga qabow Ruushka. Cayaartu waxay leedahay cimilo firfircoon oo leh wejiyada habeen iyo maalin khariidad weyn taas oo qarisa sir badan iyo daqiiqado cabsi badan leh.
Baxniintii waxay leedahay horumar furan oo cadaalad ah iyo adduun isbeddelaya oo sahaminta iyo soo-ururinta kheyraadka ay muhiim u tahay sidii loola dagaallami lahaa noolaha. Ma laha ciyaartoy badan, wax la yaab leh in lagu arko ciyaar qof toogasho ugu horeysay, laakiin waa lagu qanacsan yahay inaadan iloobin in toogashada qofka ugu horeeya ay sidoo kale qaadi karto shirqool gadaashiisa. Codka dhawaaqa ciyaarta wuxuu kaa caawinayaa inaad naftaada dhex gasho koonkiisa waa wadar.
Ku hel ciyaarta qiimaha ugu fiican tan Xiriirinta uumiga.
Nolosha badh: Alyx
Ugu dambeyntii laakiin uguyaraan, waxaan sheegnay mid ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee 2020, waa qeybtii ugu dambeysay ee Nolosha Badhkeed. Maya, maahan Nolosha Badhka ah ee la filayo 3, Alyx waa ciyaar hal-abuur leh oo adeegsanaysa xaqiiqda dalwaddii si ay noogu kaxeyso adduunyada Half Life sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan. Dhacdooyinka taariikhdeeda cajiibka ah waxay na dhigeysaa inta udhaxeysa kulamada koowaad iyo labaad ee saga oo wuxuu na dhex dhigayaa kabaha Alyx Vance. Cadowgu wuu sii xoogaysanayaa marba marka ka dambaysa, halka iska caabbintu qoranayaan askar cusub oo la dagaallama.
Shaki la'aan waa ciyaarta ugu fiican uguna macquulsan ciyaarta ilaa maanta, waxaan ku raaxeysaneynaa labadaba sheeko ahaan iyo ciyaar ahaanba, muddadeedu waa mid aan caadi aheyn inkasta oo uu yahay ciyaar VR ah, oo badiyaa dembiyadu gaaraan muddada gaaban. Dejisteeda ayaa ah waxa taageere kasta oo taxanaha ka filan kara, jawi aan caadi ahayn iyo dejino noo oggolaanaya inaan la falgalno ku dhowaad shey kasta oo aan helno. Bulshadu waxay si hagar la’aan ah ugu shaqeysaa abuurista iyo balaarinta ciyaarta. Cayaartu shaki la'aan waa mid ka mid ah kuwa ugu baahida badan kombuyutarka, sidaa darteed waxaan u baahanahay qalab casri ah, iyo sidoo kale muraayadaha la jaan qaadi kara.
Hel Nolosha Badh: Alyx qiimaha ugu fiican tan Xiriirinta uumiga.
Haddii aadan wax toogasho ahayn, qodobkan kale waxaan kugula talineynaa ciyaarta wadista, sidoo kale waan kuu soo bandhigeynaa talo ku saabsan ciyaaraha badbaadada.
Haddii aadan haysan PC waxaad fiirin kartaa qodobkan meesha waxaan kugula talineynaa ciyaaraha loogu talagalay PS4 ama kan kale meesha waxaan kugula talineynaa ciyaaraha mobilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Guriga » Videogames » Ciyaaraha toogashada ee ugufiican PC
Melomania Touch, sameecadaha dhagaha wanaagsan ee laga helo Cambridge Audio